CMO စစ်တမ်း - ၂၀၁၃ သြဂုတ်လ Martech Zone
CMO စစ်တမ်း - ၂၀၁၃ သြဂုတ်လ
အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 27, 2013 Douglas Karr
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ်များ (CMOs) သည်လူမှုရေးမီဒီယာများသို့အရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုများပြားစွာဖြန့်ဝေပေးနေသော်လည်း၊ CMO စစ်တမ်း.
ပါမောက္ခများကစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သော CMO ၄၁၀ တွင် ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည် ခရစ္စ Moorman of Duke တက္ကသိုလ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်း Fuqua ကျောင်း သူတို့ကသူတို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်အသုံးစရိတ်အပေါ်အရေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုသက်သေပြပြီဟုပြောသည်။ အခြား ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းကတုန့်ပြန်မှုတွင်၎င်းတို့သည်အရည်အသွေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သော်လည်းအရေအတွက်အရေအတွက်အပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။
စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့် CMOs ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း (၄၉ ရာခိုင်နှုန်း) သည် ၄ ​​င်းတို့ကုမ္ပဏီ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာလှုပ်ရှားမှုများမှာထူးခြားမှုရှိသည်ဟုပြသနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်လင့်ကစားစျေးကွက်သမားများသည်လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းလူမှုမီဒီယာတွင်အသုံးစရိတ်များကို ၆.၆ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၅.၈ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြှင့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသုံးစရိတ်၏သက်ရောက်မှုကိုပြသခြင်းသည်ကုမ္ပဏီများအတွက် ပို၍ ယေဘုယျပြproblemနာဖြစ်နေသည်ဟုစစ်တမ်းကောက်ယူသည့် CMOs များကဆိုသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သောထိပ်တန်းစျေးကွက်၏သုံးပုံတစ်ပုံမျှသာသူတို့ကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏အသုံးစရိတ်၏စျေးကွက်အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုအရေအတွက်ပြနိုင်ကြောင်းတင်ပြကြသည်။ ထို့ကြောင့် Moorman ၏အဆိုအရ CMO ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းသည်သူတို့၏စီအီးအိုများနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့များမှစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း၏တန်ဖိုးကိုသက်သေပြရန်ဖိအားများပိုမိုကြုံတွေ့နေရသည်ဟု Moorman ၏အဆိုအရအံ့သြစရာမဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့အနက်သုံးပုံနှစ်ပုံသည်ဤဖိအားတိုးပွားလာသည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်။
“ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင်မှုက CMOs တွေဟာခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားတွေပေးဖို့လိုတယ်၊ ရေတိုကာလတိုမှာမဟာဗျူဟာမြောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်။ CMO စစ်တမ်း၏ဒါရိုက်တာ Moorman က CMO များသည်စားပွဲတင်ထိုင်ခုံတွင်သာ ၀ င်ငွေရလိမ့်မည်” ဟုပြောကြားသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး analyticsစျေးကွက်၏ကြီးမားသောအချက်အလက်များ၏ဗားရှင်းသည်လက်ရှိစျေးကွက်၏ဘတ်ဂျက်၏ ၅.၅ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးလာမည့်သုံးနှစ်အတွင်း ၈.၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် ဤကြီးမားသောအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ရရှိနိုင်သောသို့မဟုတ်တောင်းဆိုထားသောစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုအသုံးပြုသောစီမံကိန်းများ၏ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည် analytics လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
၎င်းသည် CMOs များသည်စျေးကွက်၏“ ပျမ်းမျှ” မျှသာတင်ပြသောတွေ့ရှိချက်နှင့်တိုက်ဆိုင်သည် analytics ကုမ္ပဏီ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို (၃ ချက်သည် ၇ ချက်အမှတ် (၁) သည်လုံးဝမဟုတ်ပါ၊ ၇ သည်အလွန်မြင့်မားသည်) ဤအရေအတွက်သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်က ၃.၉ ရှိစဉ်က၎င်း၏ပထမဆုံးတိုင်းတာမှုမှလျော့နည်းသွားသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသမားများလည်းဖြစ်ကြသည် ဒေတာစုဆောင်းသူတို့ရဲ့အားထုတ်မှုကိုတိုးမြှင့် အွန်လိုင်းဖောက်သည်အပြုအမူအကြောင်းကို။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်အွန်လိုင်းဖောက်သည်များ၏ပစ်မှတ်ထားရည်ရွယ်ချက်များအတွက်စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရရှိခဲ့ပြီး ၈၈.၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုလုပ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်ရသည်။
အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ both နှစ်ခုလုံးတွင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုး။ ဆူညံသံများတိုးပွားနေသော်လည်းသီးသန့်တည်ရှိမှုသည်စျေးကွက်သမားများအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ ဖြေဆိုသူ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနိမ့်ကျနေပြီး ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းကသာသူတို့ဟာသီးသန့်တည်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး“ အလွန်စိုးရိမ်နေကြတယ်” ဟုဖြေကြားကြပါတယ်။
စျေးဝယ်သူများသည်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖောက်သည်များနှင့်ရိုးသားစွာညှိနှိုင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဖောက်သည်များကသူတို့တွေ့ရှိနေကြောင်းသိရန်၊ ထိုတွေ့ရှိချက်များကိုသဘောတူရန်နှင့်စျေးကွက်များမှပြန်လာရန်ပိုမိုတန်ဖိုးရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း Moorman ကပြောကြားခဲ့သည်။
လေးနှစ်အတွင်း CMO များသည်အမေရိကန်၏စီးပွားရေးအပေါ်အကောင်းမြင်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ 0-100 အတိုင်းအတာအရ0သည်အကောင်းမြင်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်သည့် CMO ရမှတ် ၆၅.၇ တွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနိမ့်ကျသည့်နေရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာသည်။ ထိပ်တန်းစျေးကွက်၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကလွန်ခဲ့သည့်သုံးလပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမေရိကန်၏စီးပွားရေးကိုပိုမိုအကောင်းမြင်သည်ဟုဖြေကြသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်အကောင်းမြင်သူများ ၁၄.၉ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိသည်။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်ကြီးထွားမှုသည် ၄.၃ ရာခိုင်နှုန်းတိုးရန်မျှော်လင့်ပါသည် လာမယ့် 12 လအတွင်း။ CMOs မှတင်ပြသည်မှာလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကအသုံးစရိတ်အပြောင်းအလဲသည် ၉.၁ ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာလိမ့်မည်၊ ဤအသုံးစရိတ်သည်ယေဘူယျအားဖြင့်စီးပွါးရေးနှင့်ဆိုင်သောပုံစံဖြင့်ရွေ့လျားနေသည်ဟုညွှန်ပြနေသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်အသုံးစရိတ်များပြောင်းလဲမှုမှာလည်းရှိသည် 10.1 ရာခိုင်နှုန်းကိုချွတ်ညှိပြီး (လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကဤကိန်းဂဏန်းသည် ၁၃.၆% ရှိသည်။ )
ဖြေဆိုသူ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းကအနောက်ဥရောပသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်ငွေတိုးတက်မှုအမြင့်မားဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက်တရုတ်နှင့်ကနေဒါ (၁၈ ရာခိုင်နှုန်းစီ) ရှိသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်တည်ထောင်ခဲ့သော CMO စစ်တမ်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိထိပ်တန်းစီးပွားရေးသမားများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုတစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်စုဆောင်းဖြန့်ဖြူးသည်။ ပိုမိုလေ့လာပါ CMO စစ်တမ်း.
Tags: အကြီးအကဲစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိစင်ကာပူcmo စစ်တမ်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမက်ထရစ်မက်ထရစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာလူမှုမီဒီယာ roiစစ်တမ်း
Blog ည့်ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်း - သင်မှားယွင်းစွာလုပ်ဆောင်နေသည်
OMA - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အသွားအလာထုတ်လုပ်မှုပလက်ဖောင်း
သြဂုတ် 28, 2013 မှာ 10: 04 AM
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုရှယ်မီဒီယာကြိုးပမ်းမှုများတွင် ပိုမိုပါဝင်လာကြပါစို့။ ဒီလိုနဲ့ လူတော်တော်များများက မင်းကို အခုရက်တွေ တွေ့နေရတယ်။ မင်းအဲဒါကို မသုံးရင် မင်းကိုမြင်နိုင်တဲ့ အလားအလာရှိတဲ့ လူတွေအားလုံး ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။
သြဂုတ် 28, 2013 မှာ 10: 05 AM
ဆိုရှယ်မီဒီယာကို အသုံးချခြင်းရဲ့ အောင်မြင်မှုကို ခြေရာခံဖို့ နည်းလမ်းတွေ ပန်းတိုင်တွေရှိစေဖို့ စျေးကွက်ရှာဖွေသူတွေရဲ့ တာဝန်လို့ ကျွန်မထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကြိုးစားမှုရဲ့တန်ဖိုးကို သက်သေပြနိုင်ပါတယ်။ အထောက်အထားမရှိဘဲ ကုမ္ပဏီများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲသည်။
သြဂုတ် 28, 2013 မှာ 10: 16 AM
မှန်ပါသည်၊ ယနေ့ခေတ်တွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာမားကတ်တင်းသည် အရေးကြီးကြောင်း လူတိုင်းအား ပြသရန်နှင့် ယုံကြည်ရန် ခက်ခဲပါသည်။
သြဂုတ် 28, 2013 မှာ 10: 17 AM
တောင်းပန်ပါတယ် *can* မကြင်နာပါ။ ဟားဟား။
သြဂုတ်လ 28 ရက် 2013 ခုနှစ် 2:54 နာရီ
Doug သတင်းကောင်းလေး မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ ဒီအကြောင်းအရာဟာ မင်းရဲ့ဦးနှောက်ကို ခဏခဏ ရွေးမိတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဆိုတာ ငါသိပါတယ်…။ ပြီးတော့ ဆက်ပါဦးမယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်၊ CMO/marketer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အလွန်တိကျပြီး အရေးကြီးတဲ့သော့နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။
1) သင့်အသင်းအဖွဲ့အတွင်းသာမက ပြင်ပဆက်ဆံရေးကိုပါ ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ပါ။ Relational Management က အောင်မြင်မှုအတွက် အရေးကြီးဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။
2) မင်းရဲ့ ပူတင်းထဲမှာ ဘာတွေပါလဲဆိုတာ သက်သေပြပါ။ မှန်းဆနည်းများစွာဖြင့် အလုပ်မလုပ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်သည့် ဒေတာရရှိနိုင်သည်။ တစ်ခုခုအလုပ်မလုပ်သောအခါတွင် လှည့်ပတ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်း ၊ မင်းငါ့ကိုမေးရင် မားကက်တင်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်စွာ စျေးကွက်ချဲ့ထွင်နိုင်မှုအကြောင်း (နောက်ထပ်မဟုတ်ရင်) ပြပေးတယ်။